Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1388
Dren Vakinankaratra : nahavory 10 tapitrisa Ar ho an’Androy
Mihamafy ny haintany amin’iny faritra atsimon’ny Nosy tato ho ato. Vokany, vao mainka nihamafy ny mosary, ary zara raha mahita hohanina ny mponina ao anatin’ny iray andro. Noho izany, tsy afaka mianatra koa ny mpianatra amin’ny ankapobeny any Androy satria noana. Tsy mijery fotsiny izany loza mianjady amin’ireo ankizy malagasy traboina izany ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena fa […]
Androy : nohavaozina ny famatsiana rano fisotro madio ao Ampotaka
Par Taratra sur 10/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nitokana ny fotodrafitrasa nasiam-panavaozana ao amin’ny tanànan’ Ampotaka, kaominina Marolinta, distrikan’i Beloha, faritra Androy, ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, ny alatsinainy teo. Efa tranainy satria niorina tamin’ny taona 1990 ary nohavaozina ity toeram-pamatsian-drano any an-toerana ity. Iandraiketan’ny AES kosa ny fitantanana izany fotodrafitrasa izany hampirindra tsara ny fahazoan’ny mponina misotro rano madio. Mahatratra 45 ireo […]
R’Imbosa sy Kolibera : ho harena iraisam-pirenena ny bagasy
Par Taratra sur 10/02/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Raikitra ny « Tournée Internationale R’Imbosa-Kolibera 2016 » ! Ankoatra ny fampisehoana, « ho fiarovana sy fanapariahana ny bagasy ny dianay any ivelany », hoy i Mbosa. Goavana indrindra amin’izany ny hampidirana ny bagasy ao anatin’ny harentsaim-pirenena tsy mivainga, raha ny fanazavany. Manaraka an’io ny fampahafantarana ny bagasy eo anivon’ny sampandraharahan’ny Firenena Mikambana misahana ny kolontsaina sy ny fanabeazana (Unesco) […]
Havondrona anaty komity ireo rehetra vonona ny hanohana ny « Rencontres du film court » (RFC), hetsika miompana amin’ny horonantsary fohy ary fanao isan-taona eto amintsika. Izay no anisan’ny misongadina manomboka amin’ny andiany faha-11, hatao ny 15 hatramin’ny 23 avrily izao eto Antananarivo. Mihamivelatra hatrany ny tanjon’ny RFC. Amin’izao fotoana izao, anisan’ny kendren’ny mpikarakara ny hahamatihanina kokoa […]
« Précédent 1 … 1 386 1 387 1 388 1 389 1 390 … 1 424 Suivant »